Ingersoll Rand Air ကိုရေနံသီးခြားစီ - တရုတ် Airpull (ရှန်ဟိုင်း) Filter ကို
Ingersoll Rand Air ကိုရေနံသီးခြားစီ
Atlas Copco ရေနံစိစစ်မှုများ
Ingersoll Rand ရေနံစိစစ်မှုများ
Airpull ထိုကဲ့သို့သော Almig, Alup, Atlas Copco, CompAir, Fusheng, Gardner Denver, Hitachi, Ingesoll Rand, Kaeser, Kobelco, LiuTech, မန်း, Quincy, Sullair, Worthington နှင့်အမျှလေကြောင်း Compressor များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Air ကို Filter ကို, ရေနံ Filter ကိုနှင့် Air ရေနံခြားစေ အခြားအဓိကအမှတ်တံဆိပ်။
ဤသည် Ingersoll Rand လေကြောင်းတွန်းဆက်ကပ်အပ်နှံလေထုရေနံ separator အမေရိကန် HV သို့မဟုတ် Lydall ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ် ultra-ဒဏ်ငွေဖန်ဖိုင်ဘာသက်ဆိုင်ဝက်အူ။ ဒါဟာချုံ့လေကြောင်းကနေအခိုးအငွေ့ရေနံရောနှောအနည်းဆုံး 99.9% ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်အဆင့်မြင့် Bond ခွန်အားနှင့်ကြွလာတော်မူသောအသစ်တီထွင် Two-အစိတ်အပိုင်းကော်, အ separator ပင် 120 ℃အထက်တွင်၏အပူချိန်အောက်မှာပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါရန်အသုံးပြုသည်။
ဒါ့အပြင်လေကြောင်းရေနံ separator ဤအမျိုးအစားပြင်ပသို့မဟုတ် built-in အမျိုးအစားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနီးပါးနှစ်ပေါင်း 20 နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့က high-grade ကို OEM ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းဥပမာ, မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဝက်အူလေကြောင်းတွန်းများအတွက်အသုံးပြုသော separator ဒီဇိုင်း Atlas Copco, Sullair, Fusheng, နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ, etc နိုင်ပါတယ်
ဒီထုတ်ကုန်ဟာချုံ့လေကြောင်းကနေအခိုးအငွေ့, ဆီခွဲထုတ်ဖို့မိုက်ခရွန်ဖန်ဖိုင်ဘာအသုံးပြုသည်။ ထိုအခါကြီးမားသောရေနံကျဆင်းမှုဟာဆွဲငင်အားကိုထိခိုက်အောက်မှာစုဆောင်းပါလိမ့်မည်သည့်အခိုးအငွေ့ရေနံကနေ coalesced ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စုဆောင်းဆီတွန်း၏ရေနံလိုင်းပြန်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ်စတှငျ, ဒီမိုက်ခရွန်ခွဲခြာလေထုတွန်း၏ရေနံသုံးစွဲမှု minimize လုပ်။
1. ကနဦး Saturation ကိုဖိအား Drop: ≤0.02 MPa
2. ပြီးနောက် Separated အဆိုပါရေနံအကြောင်းအရာ: ≤5 ppm
3. ဖိအားကျဆင်းမှု 0.1MPa ထက်မပိုသောအမှု၌, ရေနံ separator သည်အနည်းဆုံး 4000 နာရီအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
မှတ်ချက်: အထက်ပါ parameters တွေကို rated အလုပ်လုပ်ဖိအားနဲ့ rated စီးဆင်းမှု၏အခြေအနေများအောက်တွင်ရရှိခဲ့ကြသည်။ မှတပါး, အများဆုံးအပူချိန်ပိုမ 120 ထက်℃ဖြစ်တယ်။ နဲ့ GB / T7631.9-1997 ကအုပ်ချုပ်သည့်ဒါးချောဆီအရည်ကြည်ကိုဆီအသုံးပြုသည်။ ကိုခှဲထုတျမတိုင်မီကဆီကိုအကြောင်းအရာ 3000ppm ထက်မပိုဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းအပိုင်းအမှတ် AIRPULL အပိုင်းအမှတ်
22388045 AA ကို 096 212
54720735 AA ကို 135 177
54749247 AA ကို 135 302/1
22242606 AA ကို 135 302/1
42841247 96 613 30, 455
39739578 96 613 30, 455
39831912 96 613 30, 455
39863865 96 613 30, 455
23545841 96 600 30, 451
92765783 96 600 30, 501
88181755 96 600 30, 501
46853107 AA ကို 135 302/1 နာရီ
centrifugal ရေနံခြား | Rotary ဝက်အူကွန်ပဆက်စပ်ပစ္စည်း | Air ကိုကွန်ပဖြန့်ဖြူး
နောက်တစ်ခု: Atlas Copco Air ကိုရေနံသီးခြားစီ
Air ကိုကွန်ပ Filter ထိုအခြား
Atlas Copco ကို Maintenance Kit
Atlas Copco ပိုအပိုင်း
ချီကာဂို Pneumatic ပိုအပိုင်း
ကွန်ပ Filter ကိုထိုအ separator
Filter ကိုထိုအ separator စက်ရုံ
ရောင်းရန် Filter ကိုထိုအ separator
Fusheng ရေနံ separator
Gardner Denver ကို Maintenance Kit
Gardner Denver ရေနံ separator
Gardner Denver ပိုအပိုင်း
Ingesoll Rand ကို Maintenance Kit
Ingesoll Rand ရေနံခြား
Ingesoll Rand အားလပ်ချိန်မှာအပိုင်း
Kaeser ကို Maintenance Kit
Mitsui Seiki ရေနံခြား
Mitsui Seiki ပိုအပိုင်း
Sullair ရေနံ separator
Worthington ရေနံ separator
Fusheng Air ကိုစိစစ်မှုများ
Atlas Copco Air ကိုစိစစ်မှုများ
Atlas Copco Air ကိုရေနံသီးခြားစီ
Fusheng Air ကိုရေနံသီးခြားစီ